Safarka iyo dalxiiska Hindiya oo wajahaya dhibaato dhaqaale oo deg deg ah |
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka Safarka Hindiya » Safarka iyo dalxiiska Hindiya ayaa wajahaya dhibaato dhaqaale oo deg deg ah
Saameynta cudurka faafa wuxuu sii wadaa burburka nolosha iyo habnololeedka safarka iyo dalxiiska Hindiya iyo waliba martigelinta sanadkii labaad oo xiriir ah. In kasta oo qaybaha qaar si tartiib tartiib ah mar kale u furmayaan, halganka ayaa sii wadaya sidii uu ula soo bixi lahaa nolol maalmeedkiisa.
Warshadaha safarka iyo dalxiiska ee Hindiya waxay ku biiriyeen US $ 194 bilyan dhaqaalaha Hindiya sanadka 2019 waxayna abuureen ilaa 40 milyan oo shaqo, taas oo ah, boqolkiiba 8 wadarta shaqadeeda.
Waxaas oo dhami waxay u istaageen cudurkii faafa awgood waxayna tani abuurtay saameyn ku ficillan dhanka warshadaha.
Natiijadu waxay noqotay in hudheelo iyo meherado badan ay xirmeen oo shaqo abuur u abuuraya qaar badan oo ka mid ah kuwa ku tiirsanaa warshadan noloshooda.
Khubarada caafimaadka ayaa saadaaliyay in mowjad saddexaad oo ah COVID-19 ay tahay lama huraan. Dawladdu waxay u baahan tahay inay hadda wax ka qabato oo ay si deg deg ah u bixiso tallaabooyin gargaar ah si loo xalliyo dhibaatada deg-degga ah ee lacag-la'aanta ah ee soo food saartay warshadaha safarka iyo dalxiiska ee Hindiya.
Xiriirka Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (FICCI) ayaa mar labaad dowladda ka codsaday in la joojiyo dhammaan raasamaalka shaqada, maamulaha, bixinta dulsaarka, amaahda iyo dulsaarrada oo dhammaaday bishii Ogos 2020 si loogu kordhiyo 1 sano oo kale, ie, Ogast 2021.
Qaab dhismeedka xallinta RBI, oo la diyaariyey intii lagu jiray mawjaddii koowaad ee masiibada, waxay u baahan tahay in dib loo eego. Saameynta sii socota ee mowjadda labaad, waxay ku qaadan doontaa ugu yaraan 4-5 sano warshadaha hudheelka si ay u arkaan dib ugu noqoshada xoogaa muuqaal caadi ah howlaheeda. Xaaladdan oo kale, muddada dib-u-habeynta iyo saamiga ayaa loo baahan yahay in dib loo eego. Waa lagama maarmaan in muddada dib-u-habeynta qaybtan la kordhiyo illaa iyo Maarso 2024 - 2025.
FICCI waxay sidoo kale ka codsatay dowlada inay kordhiso mudada dib u bixinta ee Qorshaha Dammaanada Khadka Amaah ee Degdega ah (ECLGS) ilaa 8 sano (4 sano oo hakad ah iyo 4 sano dib u bixin). Hawlwadeenada dalxiiska, oo ka mid ah kuwa ugu liita ee qaybtan, waxay aad ugu baahan yihiin qoraallada Adeegyada Dhoofinta ee Hindisaha Hindisaha (SEIS) ee sanad-maaliyadeedka 2018-2019 oo wali ay tahay in iyaga la siiyo. Tani waxay ka caawin doontaa inay xoogaa ku dul noolaadaan dhibaatada.
Dib-u-dhigista GST iyo bixinta canshuuraha ee heerarka Dowladda Dhexe iyo ka saarista khidmadaha ruqsadaha soo socda, oggolaanshaha / cusbooneysiinta iyo xirmooyinka lagu sii daayo si loo maalgeliyo loona taageero mushaaraadka shaqaalaha ayaa iyaduna waxoogaa gargaar ah bixin doonta. Dawladdu waxay u baahan tahay inay ku dhawaaqdo tallaabooyinka gargaarka ee hadda si warshaddu u hesho rajo kasta oo ay kaga badbaadi karto dhibaatada.
Warshadaha dalxiiska iyo dalxiiska ee Hindiya waxay sidoo kale u baahan yihiin taageero joogta ah oo ay ka helaan dowladda si ay usoo noolaato oo ay u sii xoogaysato mustaqbalka. FICCI waxay ku talisay taas Dalxiiska Hindiya waa in lagu daraa liiska isku midka ah ee Dastuurka si Xarunta iyo dowlad-goboleedyaduba ay ugu qaabeyn karaan siyaasadaha dalxiiska kobcinta Dalxiiska. Si loo soo nooleeyo dalxiiskii gudaha, dowladdu waa inay bixisaa canshuur celin illaa rupees 1.5 lakh ah oo loogu talagalay kharashaadka ciidaha gudaha ee khadadka Gunnada Safarka ee Fasaxa (LTA).
Isbeddelada siyaasadeed ee muhiimka ah sida bixinta xaaladda kaabayaasha dhammaan hudheelada, bixinta xaaladda dhoofinta ee dakhliga sarrifka lacagaha qalaad ee dalxiisyada iyo hudheelada soo galaya iyo aasaasidda "Madadaalo Soosaarid Hub" oo hoos timaadda Atmanirbhar Bharat Abhiyan dhammaan gobollada oo dhan waxay taageeri doontaa horumarka guud ee waaxda.
Warshadaha safarka iyo dalxiiska ee Hindiya ayaa hadlaya
Hogaamiyaha safarka iyo dalxiiska Hindiya oo aad loo ixtiraamo, Amit Prasad, oo ah agaasimaha guud ee Le Passage ee Hindiya, ayaa si aad ah uga walaacsan xaaladda ay haatan ku sugan tahay safarka dalxiiska iyo dalxiiska. Wuxuu sheegay in wax badan aysan qaban dowladda Hindiya si dib loogu soo nooleeyo safarkii iyo dalxiiskii dalka. Wuxuu intaas ku daray in warshadaha dalku ay qarka u saaran yihiin inay burburaan, kuwa ilaa iyo hadda awood u yeeshay inay ku sii noolaadaan warshadaasina waxay ahayd inay shaqaalaha u fasaxaan oo ay jaraan mushaharka si ay dusha ugalaabtaan.
Hindiya gudaheeda, laga bilaabo Janaayo 3, 2020, illaa maanta, Juun 23, 2021, waxaa jirey 30,028,709 kiis oo la xaqiijiyey oo ah COVID-19 oo ay u dhinteen 390,660, oo loo gudbiyey Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO). Laga bilaabo Juun 15, 2021, wadar ahaan 261,740,273 qiyaaso tallaal ayaa la qaatay.